मल्टिब्यागर सेयर खरिद गर्ने बेला भएकै हो त ! «
प्रकाशित मिति : फाल्गुन ५, २०७५ आईतबार
मल्टिब्यागर सेयरले केही वर्षमै धेरै गुणा प्रतिफल दिने हुनाले
यस्ता सेयरमा गरिने लगानीले सम्पत्तिमा राम्रो वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
सेयर बजारका विजेताको सफलताको दृष्टान्त अध्ययन गर्दा सबैमा एउटा ब्यवहार साझा पाइन्छ— मल्टिब्यागर सेयरमा लगानी ।
मल्टिब्यागर सेयरको परिभाषा
मल्टिब्यागर सेयर भनेको त्यस्तो सेयर हो, जसले धेरै गुणा प्रतिफल दिन्छ । यो शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम पिटर लिन्चले सन १९८८ मा आफ्नो पुस्तक वान अप अन वाल स्ट्रिटमा उल्लेख गरेका थिए । उनले उक्त शब्द बेसबल खेलबाट लिएका थिए, जसमा ब्याट्सम्यान (रनर) ले बल हिट गरेपछि फिल्डमा रहेका तीनवटा ‘बेस’ अथवा ‘ब्याग’ सम्म पुगेको आधारमा प्वाइन्ट स्कोर गर्न सक्छ ।
त्यसैले टेन ब्यागर स्टक भन्नाले त्यस्तो स्टक भन्ने बुझिन्छ, जसमा गरिएको लगानीले १० गुणा प्रतिफल दिन्छ भने फाइभ ब्यागर स्टकले ५ गुणा प्रतिफल दिन्छ । यी त्यस्ता स्टक हुन्, जुन विभिन्न कारणले अवमूल्यन (अन्डर भ्यालुड) भएका हुन्छन् तर तिनका आधारभूत सूचकहरू एकदमै बलियो अवस्थामा रहेकाले राम्रो प्रतिफलको सम्भावना धारण गरेका हुन्छन् ।
मल्टिब्यागर सेयरको आकर्षण
कस्तो कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा त्यसले १ देखि २ वा ३ वर्षको अन्तरालमा कम्तीमा २ गुणादेखि ४ वा ५ गुणासम्म प्रतिफल दिन सक्छ भनेर पत्ता लगाउने काम त्यति सहज छैन । बुलिस बजारको अवस्थामा राम्रा र भविष्य उज्ज्वल भएका सबैजसो कम्पनीको मूल्य अधिमूल्यन (ओभर भ्यालुड) भएको हुने हुनाले त्यस्ता कम्पनीको सेयरमा गरिने लगानीले मल्टिब्यागरको काम नगर्न सक्छ ।
सूचीकृत हरेक कम्पनीको वित्तीय सूचकहरूमा कुनै परिवर्तन नभएको बरु प्रगति नै भएको अवस्थामा पनि अन्य तत्वका कारणले सेयर मूल्यमा भारी गिरावट आउन सक्छ । ती कारणमा उच्च ब्याजदर, राजनीतिक अन्योलता, सरकारी दृष्टिकोण, उच्च आपूर्ति, मागमा कमी र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा आउने कमीलाई प्रमुख रूपमा लिन सक्छौ ।
मल्टिब्यागर सेयरले केही वर्षमै धेरै गुणा प्रतिफल दिने हुनाले यस्ता सेयरमा गरिने लगानीले सम्पत्तिमा राम्रो वृद्धि गर्न सकिन्छ । सेयर पण्डित, खेलाडी तथा विशेषज्ञहरूले यस्तै अवस्थामा छानी–छानी मल्टिब्यागर सेयरहरूमा खरिद बढाएर ढुक्कले ३ वा ४ गुणा नबढे सम्म कुरेर बस्छन् । जसरी बकुल्लाले आँखा चिम्लेको जस्तो भ्रम फैलाएर माछालाई आफ्नो नजिक आउने मौका दिन्छ र आफ्नो पहुँचमा आउनेबित्तिकै क्वाप्लाक्कै टिपेर निल्छ र फेरी उही स्थितिमा बस्छ ।
मल्टिब्यागर सेयर कसरी पत्ता लगाउने ?
अहिलेको हाम्रो सेयर बजारको अवस्थालाई मल्टिब्यागर कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने उपयुक्त समयका रूपमा लिन सक्छौं । तर, त्यस्तो कम्पनी कसरी पत्ता लगाउने ? केही सहजै उपलब्ध आधारहरूको विश्लेषणबाट यस्तो कम्पनीको पत्ता लगाउन सकिन्छ । ती आधारहरू निम्न हुन सक्छन् :
वासलातको अध्ययन गर्ने : सर्वप्रथम कम्पनीको वासलात अध्ययन गर्नुपर्छ । यसको विश्लेषणबाट कम्पनीको समग्र आर्थिक अवस्थाका बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ, जसमा प्रतिसेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, किताबी मूल्य, मूल्य किताबी मूल्य अनुपात, इक्विटीमा प्रतिफल, ऋण इक्विटीको अनुपातजस्ता महत्वपूर्ण सूचकहरूको जानकारी लिन सकिन्छ, जसको सहायताले कम्पनीको कार्यसम्पादनका बारेमा थाहा हुन्छ ।
प्रतिसेयर आम्दानी र मूल्य आम्दानी अनुपात : उच्च प्रतिसेयर आम्दानी भएकालाई राम्रो मानिन्छ, साथै मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) ले कम्पनीको सेयर मूल्य कम वा बढी के छ भनेर दाँज्न सकिन्छ । मूल्य आम्दानी अनुपात जति थोरै भयो त्यति नै सेयरलाई आकर्षक मानिन्छ । तथापि यसैलाई मात्र आधार बनाउन भने हुँदैन ।
किताबी मूल्य, मूल्य किताबी मूल्य अनुपात : यो अर्को महत्वपूर्ण सूचक हो । किताबी मूल्यले कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफालाई कम्पनीको ब्यापार बढाउन प्रयोग गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ । निरन्तर वृद्धि हासिल गरिरहेको कम्पनीले मुनाफाबाट नगद लाभांश बाँड्नुको सट्टा कम्पनीकै ब्यापार बढाउन प्रयोग गर्न रुचाउँछ । ब्यपार बृद्धिको सम्भावना नभएका कम्पनीले भने नगद लाभांशलाई प्राथमिकता दिन्छन् ।
मूल्य किताबी मूल्य अनुपात (पी–बीभी रेसियो) ले उक्त कम्पनीको सेयर मूल्य किताबी मूल्यको तुलनामा कति गुणा घटी अथवा बढी छ भनेर देखाउँछ । सामान्य अवस्थामा किताबी मूल्य ऋणात्मक भएको अवस्थामा बाहेक सेयर मूल्य किताबी मूल्यभन्दा कममा पाउन सम्भव देखिँदैन, त्यसैले यस्तो अनुपात जति कम भयो त्यति नै मूल्य आकर्षक हुन्छ ।
सामान्यतया पी–ई रेसियो १२ भन्दा कम र पी–बीभी रेसियो १.५ भन्दा कम भएको सेयरको मूल्यलाई आकर्षक मानिन्छ ।
ईक्वीटीमा प्रतिफल (आरओई) : आरओईबाट सेयरधनीको प्रत्येक रु. १ मा कम्पनीले कति नाफा आर्जन गर्न सकेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । आरओईलेले कम्पनीको मुनाफालाई भन्दा पनि कार्यक्षमतालाई मापन गर्छ । बढ्दो आरओईले कम्पनीले थप पुँजी लगानी नगरी मुनाफा बढाउन सफल भएको छ भन्ने बुझिन्छ । यसले कम्पनीको ब्यवस्थापनले सेयरधनीको इक्विटीको राम्ररी सदुपयोग गरेको छ भन्ने बुझिन्छ । आरओईको अनुपात जति धेरै भयो त्यति राम्रो मानिन्छ । सामान्यतया १५ देखि २० प्रतिशतको आरओईलाई राम्रो मानिन्छ ।
ऋण र इक्विटीको अनुपात : मल्टिब्यागर कम्पनी छनोट गर्दा ऋण र इक्विटीको अनुपातलाई पनि ध्यान दिनु पर्छ । किनभने ऋणको मात्रा अत्यधिक भएको अवस्थामा मुनाफाको ठूलो अंश त्यसको ब्याजमा खर्चिनुपर्छ, जसले प्रतिसेयर आम्दानीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा यस्तो अनुपात ३० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ मान्यता छ ।
कम्पनीको विगतको कार्य सम्पादन : मल्टिब्यागर कम्पनी छनोट गर्नका लागि कम्पनीको गत विगत वर्षको कार्य सम्पादनलाई पनि विचार गर्नुपर्छ । यदि उक्त कम्पनीले गत विगत वर्षदेखि नै निरन्तर रूपमा नाफामा बढोत्तरी, सेयरधनीलाई निरन्तर रूपमा आकर्षक बोनस तथा नगद लाभांश वितरण गरेको दृष्टान्त छ भने त्यस्ता कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल पाइन्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार रहन्छ ।
सस्थापक सेयरधनीको पेसागत छवि : सस्थांगत सेयरधनीका पेसागत छविले पनि कम्पनीको साखलाई उच्च बनाएको हुन्छ । समान सूचक भएका दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा हुने भिन्नताको प्रमुख कारण यो पनि हो । त्यसैले बजार बियरिस ट्रेन्डमा गएका बेलामा सबै कम्पनीका सेयर मूल्य ओरालो लागेको अवस्थामा यस्ता कम्पनीको मूल्य पनि अवमूल्यन भएको हुन्छ । अत: सेयर मूल्य अवमूल्यन भएका बेला यस्ता कम्पनीको पहिचान गरी गरिएको लगानीले उच्च प्रतिफल दिने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन ।
आकर्षक त्रैमासिक आम्दानी : कम्पनीहरूले प्रस्तुत गर्ने त्रैमासिक विवरणमा विगतको तुलनामा आय तथा मुनाफामा उच्च वृद्धि गर्न सफल भएका छन् र उक्त आय तथा मुनाफा नियमित कारोबारबाट बढाएका छन् भने तिनको भविष्यको सम्भावानालाई नकार्न नसकिने हुनाले यसलाई पनि आधार मान्न सकिन्छ ।
अवमूल्यन भएको सेयरको पहिचान : मल्टिब्यागर कम्पनी छनोटका लागि बजारमा न्यून मूल्यांकित सेयरको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । कम्पनीको समग्र आर्थिक सूचकहरू राम्रा भए तापनि बजारमा प्रभाव पार्न सक्ने अन्य तत्वहरू (ब्याजदर, माग र आपूर्तिको अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक अन्योलता आदि) का कारणले गर्दा सेयरको मूल्य न्यून मूल्यांकित भएको हुन्छ । तर, त्यस्ता कारणहरू सधैं कायम नरहने भएकाले दीर्घकालीन हिसाबले त्यस्ता कम्पनीको सेयरमा गरिने लगानी मल्टिब्यागर हुन सक्छ ।
बजारको वर्तमान अवस्था : घट्दो बजारमा उच्च कारोबार भएमा त्यसलाई खतराका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेको न्यून कारोबार १ वा २ रुपैयाँका लागि पनि लगानीकर्ताको बीचको तीव्र मोलमोलाइ, खरिद गर्न चाहनेले चाहे जस्तो सेयरको मात्रा नपाउने कारणले गर्दा लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।
यस्तो बेला बजारमा कुनै पनि सकारात्मक धक्का (ब्याजदरमा कमी, सस्थांगत लगानीकर्ताको प्रवेश तथा कम्तीमा प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा ब्रोकरेज सेवाको संजाल स्थापना आदी) लाग्नेबित्तिकै बजारले अनपेक्षित सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउने सम्भावना प्रबल छ ।
संस्थागत लगानीकर्ताले अहिलेको अवस्थाबाट लाभ उठाउने कि नउठाउने ?
२७ वटा सूचीकृत बैंकको दोस्रो चौमासिकको विवरण अनुसार मिति २०७५–११–०१ को मूल्यअनुसार औसत मूल्यरनेटवर्थ अनुपात १.८३ र मूल्य–आम्दानी अनुपात १२.८१ छ, जबकि नेप्से इन्डेक्स १५ जुन २०११ मा २ सय ९२ हुँदा उक्त दिनको मूल्य र २०१०–११ को वार्षिक विवरणको आधारमा बैंकिङ क्षेत्रको यो अनुपात क्रमश: १.९२ र ११.५० थियो । यो तथ्यलाई विचार गर्दा अहिलेको बजार २९२ को इन्डेक्स हुँदाको अवस्थाकै हाराहारीमा छ । बजार बढ्दै जाँदा १८८१ को बिन्दुमा पुगेको बेला (२७ जुलाई २०१६) यो अनुपात क्रमश: ७.४० र ३९.५६ थियो ।
अत: मार्केट मेकरको भूमिका निर्वाह गर्न तयार नागरिक लगानी कोष, म्युचुअल फन्डहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, बिमा कम्पनीहरू तथा अन्य ठूला तथा सस्थांगत लगानीकर्ताका लागि थोरै लगानीबाट उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने यो सुवर्ण अवसर हुन सक्छ ।
अन्त्यमा, वारेन बफेटको ‘हामीले इतिहासबाट के सिक्यौं कि मानिसले इतिहासबाट केही सिकेन’ भन्ने भनाइ यहाँ संस्थांगत लगानीकर्ताको हकमा एकदमै लागू हुन्छ । नेप्से २ सय ९२ को बेलामा जसले सेयरमा लगानी गरे ती आज मालामाल छन्– यो इतिहास हो, तर हामी यो इतिहासबाट केही पनि सिकिराखेका छैनौं । त्यस्तै बफेटको अर्को भनाइ— ‘तिमी सुतिरहेको अवस्थामा पनि पैसा आइरहने तरिका पत्ता लगाउन सक्दैनौ भने तिमीले मृत्यु पर्यन्त पैसा कमाउनका लागि काम गरिरहनुपर्छ ।’ मान्ने हो भने अर्थात् बेलामा सही निर्णय लिइयो भने त्यसले जिन्दगीभरि आम्दानी दिइरहन्छ भन्ने नभुलौं ।
उकालो लाग्छ त अर्थतन्त्र ?
यो महामारीबाट सीधै मारमा परेकाहरूका बारेमा भन्दा धन्दा गर्ने विभिन्न कारोबारीहरूको बोलवालाको संरक्षणमा समय खर्चने
भारित औसत लागत गणना र जोखिम
नियमसंगत घोषित भारित औसत लागतको असीमिति जोखिमबाट मुक्ति र मानवीय त्रुटि सच्याउन दिनुपर्छ । धितोपत्र